शाइन रेसुंगामा पूर्णिमा बैंक 'एक्विजिसन' हुने
जनतापाटी २७ फागुन
भैरहवा । रुपन्देहीमा केन्द्रीय कार्यालय रही सञ्चालनमा रहेका दुई विकास बैंकले एकता प्रक्रिया थालेका छन् । बुटवलमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र भैरहवामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पूर्णिमा विकास बैँक बीचको एकता प्रकृया सुरु भएको हो ।
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैँकले पूर्णिमालाई प्राप्ती (एक्विजिसन) सम्बन्धि सम्झौतामा शाइनका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र पुर्णिमा विकास बैँकका अध्यक्ष सुरज उप्रेतीले हस्ताक्षर गरे । शाइनको १० जिल्ला कार्यक्षेत्र छन् भने पूर्णिमाको ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका छन् । एक्विजिसन पछि एकीकृत बैकको नाम शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड राख्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शाइनकै सिईओ प्रकाश पौडेल र नायब प्रमुख कार्यकारीमा पूर्णिमाका सिईओ प्रकाश गुरुंग रहने सहमति भएको छ । एक्विजिसनपछि शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रियस्तरको बैँक हुनेछ भने बैँकको केन्द्रीय कार्यालय बुटवलमा रहनेछ ।
शाइन रेसुङ्गाको चुक्ता पूँजी रु. १ अर्व ६२ करोड २६ लाख र पूर्णीमाको रु. ५५ करोड १२ लाख रहेको छ । शाइन रेसुङ्गाको निक्षेप रु. १६ अर्व १० करोड २३ लाख र पुर्णिमाको रु. ३ अर्व ३५ करोड ६१ लाख रहेको छ भने कर्जा तर्फ शाइनको रु. १४ अर्व ५२ करोड ३६ लाख र पुर्णिमाको रु. ३ अर्व ४ करोड ६७ लाख रहेको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका ४० शाखा छन् भने पूर्णिमाका १२ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् ।
यस अघि शाइन रेसुङ्गा बेकले प्युठानको गौमुखी बिकास बैकलाई गाभेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीमा स्थापित शाइन र गुल्मीको रेसुङ्गा एकआपसमा गाभिएर शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक बनेको हो ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरका लागि आयोजना गरिएको समारोहमा बोल्दै शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैँकलाई प्रदेश ५ का सबै घरमा विस्तार गरी आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुराउने योजनाका साथ अघि बढ्ने बताए । पूर्णिमा विकास बैँकका अध्यक्ष सुरज उप्रेतीले बैंकलाई दिगो रुपमा संचालन गर्न एक्विजिसनमा जानु परेको बताए ।
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले पूर्णिमाको एक्विजिसनपछि शाइन रेसुंगा राष्ट्रियस्तरको सबल, सफल र सुदृढ विकास बैंकका रुपमा स्थापित हुने बताए ।